manyandis.plus - Manuals +
manuals.plus muunganidzwa wezvinyorwa zvevashandisi, mirairidzo, data-sheets, uye zvakatemwa zvezvigadzirwa zvemagetsi. Tiri kuwedzera zvinyorwa zvitsva kuunganidzwa kwedu zuva nezuva, tichigadzira dhatabhesi rekutsvaga nyore nyore rezvigadzirwa zvemagetsi.
Kazhinji, mapepa ereferenzi ezvishandiso ane zvakatemwa, gadziridzazve mirairo, uye yakakosha yekushandisa rubatsiro. Mimwe mirairo inowedzera pane izvi zvakare kuti ipe matipi ekugadzirisa nekugadzirisa, mamwe anogona kunge akaderedzwa seti 'yekukurumidza matipi ekutanga' - zvinhu zvakakosha zvaunoda kuziva kuti usimuke uye ushande nemudziyo.
Mabhuku emushandisi anowanzo kupihwa muPDF fomati, asi iyi fomati inogona kunetsa kushandisa panharembozha kana ine yakaderera-bandwidth yekubatanidza. Manuals.plus anonyora zvinonetesa akawanda eaya magwaro ePDF kuita enguva dzose web-mapeji kuitira kuti vashandisi vaverenge zviri nani pane yavo mudziyo wesarudzo. Izvi zvinoita kuti magwaro mazhinji awedzere kuverengera-screen-kuwanika uye kutsvagika maringe neyakajairwa fomati. Pamusoro pechinyorwa chakanyorwa, iwe unowana zvakare chinongedzo kune chepakutanga file pazasi pechinyorwa chega chega pasi pe 'mareferensi' - aya anogona kudhawunirodha kuitira gare gare uye anovhurwa neyako yaunofarira web-browser kana PDF viewseAdobe Acrobat.
Mamwe emabhuku edu makuru / kuraira kuunganidzwa kunosanganisira:
Anko Vatauri uye Smart Devices
Impirii Bluetooth Mahedhifoni uye Vatauri
Kana iwe uine bhuku remushandisi iwe ungade kuwedzerwa kune saiti, ndapota taura chinongedzo!
Shandisa tsvakiridzo pazasi pepeji kutarisa mudziyo wako. Iwe unogona zvakare kuwana zvimwe zviwanikwa pa UserManual.wiki Search Engine.
RH TEEN 1960s Canister Task Table Lamp ne Wireless Chaja Dzidziso Chinyorwa